Lalàna misotro sy mitondra fiara any Dubai na UAE: Tsy maintsy manaraka ny lalàna ny mpamily mba hisorohana ny sazy henjana. 00
Ny lalàna misotro sy mitondra fiara any Dubai na UAE ary ny fomba hisorohana ny sazy
Heloka bevava ho an'ny rehetra ny mitondra fiara noho ny alikaola, zava-mahadomelina, na inona na inona misy fiatraikany amin'ny fahaizan'ny moto. Mafy ny sazy ary mety tafiditra ao aza ny fanagadrana. Satria lohahevitra sarotra io, dia nanomana andian-dahatsoratra momba an'ity lohahevitra ity izahay. Ity lahatsoratra ity dia manarona ny fototry ny zavatra tokony ho fantatrao momba ny lalàna misotro sy mitondra fiara any Dubai na UAE. Raha misotro sy mitondra fiara ianao, dia mety haratra na ho faty amin'ny tenanao sy ireo olona tsy manan-tsiny izay mizara lalana aminao.
Misy lalàna henjana momba ny fisotroana sy ny fitondrana fiara eo ambany fitaoman'i Dubai na UAE. Na izany aza, tsy midika izany fa tsy afaka misotro toaka na toaka any Dubai ianao. Misy lalàna mifehy ny fomba fisotroana, izay mihatra amin'ny mponina sy ny mpizahatany any Dubai na UAE.
Sazy noho ny fanapoizinana toaka na zava-mahadomelina
Ny familiana noho ny fitaoman-dratsy na ny fahamamoana ao Dubai dia heloka bevava. Ny famamoana mamo dia heloka bevava satria ny alikaola dia mety hisy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitrao, ny fandrindrana ary ny fahaizanao mitondra fiara. Fatrao na hamonena ianao miankina amin'ny ireto fepetra manaraka ireto:
Ohatrinona ny nisotroanao
Ny habetsahan'ny sakafo alohan'ny fisotroana
Hafiriana no nisotroanao
Ny fomba haingana indrindra ahazoana mahonon-tena dia ny famelana ny vatanao hisotro toaka hampihena ny haavon'ny hamamoanao. Ny vatana dia mifoka alikaola amin'ny salan'isa fisotro iray isan'ora.
Ny alikaola dia alefa any amin'ny trano fisakafoanana sy fisotroana misy alikaola samihafa mifandraika amin'ny hotely ary koa fivarotana voatondro. Voarara ihany koa ny fisotroana imasom-bahoaka, ary mila manana fahazoan-dàlana hisotro toaka ny olona. Na izany aza, amin'ny trano fisakafoanana sy fisotroana manokana dia azonao atao ny misotro tsy misy fahazoan-dàlana amin'ny alikaola. Fahendrena anefa ny fananana iray.
Ilaina ny fahazoan-dàlana amin'ny alikaola satria azonao atao ny misambotra ivelan'ny toerana nankatoavana fisotroana raha toa ka voalaza na hita fa mamo sy mitondra fihetsika tsy mendrika amin'ny toerana be olona. Ny ankamaroan'ireo meloka dia tratra rehefa sendra lozam-pifamoivoizana izy ireo na mangataka fanampiana amin'ireo manampahefana rehefa eo ambany fanerena. Zava-dehibe ny mahatadidy fa iharan'ny sazy ianao raha tratran'ny mamo eo amin'ny toerana be olona, ​​na dia manana fahazoan-dàlana amin'ny alikaola aza. Ny fahazoan-dàlana dia ny tapakila hividianana alikaola fa tsy karatra fialana amin'ny fonja maimaim-poana amin'ny fandikana lalàna.
Lalàna misotro sy mitondra fiara any Dubai sy ny Emira Arabo Mitambatra
Ity lahatsoratra ity dia mihodina manodidina ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana UAE mifandraika amin'ny fitondrana fiara amin'ny alàlan'ny alikaola, zava-mahadomelina, na zava-mahadomelina hafa sy ny sazy.
Ny lalàna federaly dia mifehy ny lalànan'ny fifamoivoizana UAE No. 21 amin'ny 1995 araka ny fanitsiana ny lalàna federaly faha-12/2007 "Momba ny fifamoivoizana." Ity lalàna ity koa dia mamaritra ny sazy noho ny heloka bevava sy ny fomba fiasa mifandraika amin'izany.
Araka ny Andininy faha-10.6 amin'ny lalàm-pifamoivoizana, ny mpamily dia tokony hifady ny fitondrana fiara amin'ny alàlan'ny alikaola na zava-mahadomelina. Tsy miankina izany raha ara-dalàna na tsy ara-dalàna ny fihinanana alikaola na zava-mahadomelina.
Tsy misy fandeferana aotra ho an'ny famamoana mamo manoloana ny fampiharana ara-dalàna an'ny UAE. Aza misotro sy mitondra fiara. Inoana fa ny mpamily dia tsy mahay mifehy tsara ny fiara, ary ahiana mafy ny a loza nitranga tamin'ny fiara.
Andininy-Tsia. 10.6 amin'ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana dia manome ao amin'ny toto: "ny mpamily fiarakodia tsy tokony hitondra fiara raha mbola eo ambany fitondra-toaka, alikaola, zava-mahadomelina na zavatra hafa toa izany."
Sazy noho ny fisotroana sy ny mitondra fiara any Dubai na ny UAE
Araka ny Andininy faha-49 amin'ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana: ny sazy ho an'ireo mpamily tratra nisotro toaka sy nitondra fiara dia; fanagadrana ary onitra 25,000 59.3 AED farafahakeliny. Ny sazy dia miankina amin'ny zava-misy fa nitondra fiara noho ny alikaola ilay olona. Ny mpamily koa dia mety ho voasambotra noho ny fiampangana ny andininy faha-XNUMX.
Mety hametraka sazy fanampiny ny fitsarana. Anisan'izany ny:
Fampiatoana ny fahazoan-dàlana hamily fiara mandritra ny fotoana tsy latsaky ny telo volana ary tsy mihoatra ny roa taona. Ny mpamily koa dia voasakana tsy hahazo fahazoan-dàlana vaovao mandritra ny fotoana maharitra aorian'ny datin'ny faran'ny fahazoan-dàlana miato amin'ny andininy 58.1 amin'ny lalànan'ny fifamoivoizana.
Raha voaheloka amin'ny fitsarana ny mpandika lalàna ary lany ny fitsarana, takiana ny kopian'ny fitsarana. Natao hanamarinana ny fanasaziana izany, saingy tsy misy vidiny afaka mihoatra ny sazy voafaritry ny lalàna ny teny.
Na inona na inona fampielezan-kevitra natao sy fampitandremana dia mbola misy olona mampatahotra mbola misotro sy mitondra fiara ihany. Fa maninona Eny, ny ankamaroan'ny olona dia mieritreritra fa afaka mitantana ny fisotrony izy ireo aorianan'ny kodiarana. Ny sasany mino fa mpitsara tsara izy ireo raha afaka mitondra fiara na tsia.
Mikasika ny hafa kosa dia mety mivoady izy ireo fa tsy hitondra fiara aorian'ny fisotroana azy, fa noho ny alikaola na zava-mahadomelina, dia mandray fanapahan-kevitra diso izy ireo. Ny ankamaroan'ny olona dia tsy miraharaha izay hitranga sy ny loza mety hanjo azy ireo raha mamo izy ireo. Matoky tena loatra amin'ny fahaizany mitondra fiara izy ireo ary mieritreritra fa tsy azo kitihina.
Ny voka-dratsin'ny famamoana mamo dia tsy tsara ary mampisy 14% amin'ireo lozam-pifamoivoizana mahafaty tao anatin'ny herintaona.
Ny isan'ny mpamily mamo dia nitombo tsikelikely tao anatin'ny folo taona, ary miaraka amin'ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra dia mety hiakatra be ny isa. Raha mamaky an'ity ianao dia iray amin'ireo olona be ahiahy miahiahy momba ny sakaizany sy ny havany misotro sy mitondra fiara.
LALANA misotro any DUBAI
Mba hanampiana amin'ny fanakanana ny fisotroan-dronono mandritra ny fitondrana fiara, ny governemanta UAE dia namoaka lalàna mifehy sy manome sazy ny fisotroan-toaka sy ny fananana. Mbola tsy ara-dalàna any UAE ny misotro alikaola tsy misy fahazoan-dàlana, saingy niova be ny lalàna tamin'ny 7 Novambra 2020. Ny fihinanana zava-pisotro misy alikaola na ny mponina na ny mpizahatany dia tsy heloka bevava intsony raha atao mitokana. Na izany aza, ny olona iray dia tsy maintsy mbola farafaharatsiny 21 taona hisotroana ara-dalàna ao UAE.
Na izany aza, a fahazoan-dàlana amin'ny alikaola dia mbola takiana amin'ireo mpizahatany sy any ivelany ho an'ny toeram-pivoriana toy ny hotely na klioba tsy miankina. Na izany aza, voarara ny misotro toaka amin'ny arabe na amin'ny besinimaro. Ary koa, ho an'ireo mpandeha an-tany hafa, ny fividianana alikaola dia tsy maintsy atao amin'ny alàlan'ny fivarotana manokana.
Inona no azonao atao:
Mandritra ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra dia afaka miaraka mifanerasera amin'ny namana sy havanao ianao ary aorian'izay dia manakarama taksi. Raha tsy izany, afaka manana mpamily voatondro anao ianao na misotro toaka an-trano hipetrahanao aorian'izay rehefa mitotongana ny haavon'ny alikaola. Rehefa tonga ny maraina dia afaka mody soa aman-tsara ny rehetra.
Raha tsy izany dia manandrama alina 'maina' izay hametrahan'ny tsirairay ny tenany amin'ny habetsaky ny fisotroany. Azonao atao ny manandrana manomana lalao fifaneraserana mahafinaritra ahafahan'ny tsirairay mandray anjara. Ho an'ny drafitry ny fialantsasatra dia azonao atao ny mamandrika trano fandraisam-bahiny na trano fisakafoanana izay tsy amidy ny alikaola ary, raha misy ny hetsika, dia manaova fety izay tsy misy fisotroana.